Wakiilka Achraf Hakimi oo xaqiijiyey in xiddigu uu ka tagato Inter Milan… (Waa tee kooxda Premier League ka dheesha ee loo badinayo inuu ku biiri doono?) – Gool FM
(Milan) 18 Juun 2021. Achraf Hakimi ayaa la xaqiijiyey inuu ka tagayo kooxdiisa Inter Milan, waxaana haatan la hadal hayaa koox ka dheesha horyaalka PremierLeague oo ay u badan tahay inuu ku biiri doono.
Wakiilka Achraf Hakimi waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahanku ka tagi doono kooxda Inter, waxaana uu u gacan haatiyey kooxda Chelsea oo si weyn u doonaysa saxiixiisa.
Tababare Tuchel ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu la soo wareego daafac dadabka midig ah oo cusub kaddib markii uu booskaas ku tijaabiyay Reece James, Cesar Azpilicueta, Callum Hudson-Odoi iyo Christian Pulisic, balse ay ka soo baxeen natiijooyin isku dhafan.
22-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareed fiican la qaatay Nerazzurri, kuwaasoo ku guuleystay horyaalkoodii ugu horreeyay ee Serie A tan iyo sanadkii 2011 xilligaas oo uu hoggaaminayay Antonio Conte, isagoo dhaliyay 7 gool, isla markaana saaxiibadiisa ka caawiyey siddeed gool oo kale.
Laakiin tababaraha reer Talyaani ayaa iska casilay doorkiisii kaddib markii ay maamulka kooxda isku qabteen iibka ciyaartoyda muhiimka ah, iyadoo kooxdu ay dooneyso inay isku dheelitirto iibka xiddigahooda, waxaana ay ka walaacsan tahay dhaqaalaheeda.
Kooxda Chelsea ayaa kor u qaaday xiisaha ay u qabto saxiixa daaficii hore ee Real Madrid, waxayna soo gudbisay dalab 50 milyan oo gini ah oo lagu daray Marcos Alonso si ay tartanka xiddigan ugu garaacaan Paris Saint-Germain oo dhankeeda ka doonaysa.
Si kastaba ha noqotee, Wakiilka ciyaaryahankan ee Alejandro Camano ayaa xaqiijiyay in kooxda reer Talyaani ay xagaagan iibin doonto xiddiga reer Morocco.
“Cidda kaliya ee ka tagi doonta Inter haatan waa Hakimi oo aan sidoo kale wakiil ka ahay,” ayuu yiri Camano sida laga soo xigtay Jariiradda Metro.
“Lautaro wali ma jirto xaalad cad, laakiin Hakimi wuu tagayaa.” ayuu ku daray hadalkiisa Wakiilka Achraf Hakimi ee Alejandro Camano.